Miseho | ireo sary namboarina tamin'ny Sony Xperia X2 Androidsis
Aaron Rivas | | About us, Sony
Sony dia tsy te-hitolo-batana ho resy rehefa avy niteraka fatiantoka fidiram-bola amin'ny iray amin'ireo tsena izay nahitana ny làlana lava indrindra hatramin'ny nahaterahany, dia ny an'ny smartphone. Ny orinasa Japoney dia mamindra sombin-javatra sasany ny mamadika ny toe-javatra misy azy ankehitriny ary tsy dia mitondra valisoa be loatra, ary ny fandefasana ireo fitaovana kintana, izay ireo Xperia 10 ary ny Xperia 1, ny sainam-pireneny ankehitriny, nanatanteraka azy ireo hisarika ny sain'ny mpanjifa indray ary hiteraka isa marobe.
Ny mpanamboatra, hanomezana tanjaka ireo hetsika farany natao mba hiverenana amin'ny taloha tamin'ny tontolon'ny finday avo lenta, dia manomana terminal terminal kintana avo lenta ihany koa, izay ho tonga toy ny Xperia 2. Ny famantarana fa akaiky ity finday ity dia matanjaka, ary ity dia zavatra iray izay tohanan'ny fivoahana farany izay itenenantsika ihany koa, izay sary tena izy. Ankehitriny mba hirosoana amin'ny dinamika, ambaranay ny fandikana an'io izay nipoitra tato ho ato.
Niharihary indray ny estetika an'ny Sony Xperia 2
Ny Sony Xperia 1 dia finday iray izay lasa ofisialy teny amin'ny tsena tamin'ny volana feb. Izy io dia nandray ny endrika efijery atypical 21: 9 sy ireo endri-javatra ambony indrindra sy ny famaritana azy. Ny mpandimby azy, izay ny Xperia 2, hitazona ny tontonana manify, na dia mety miova aza ny toetrany, dia ho hafa noho izany ny diagonal-ny. Izy io dia ho fanohanana famolavolana mitovy amin'ilay efa hitantsika tao amin'ilay fitaovana voalaza etsy ambony, araka ny hita amin'ny sariny.
Na eo aza izany dia azo marihina fa hitondra fanovana vitsivitsy, toy ny fakan-tsary telo izay natsangana miorim-paka ary miorina amin'ny zoro ambony havia amin'ny fonony aoriana, fa tsy fanatontosana eo afovoany ambony. Ny bokotra ara-batana dia hitovy ary hapetraka amin'ny fomba mitovy amin'ny ilany ankavanana miaraka amin'ny mpamaky ny rantsantanana. Raha ny momba ny maodelin-tsary any aoriana dia voalaza fa misy fakan-tsarimihetsika mitovy amin'ny entin'ny Xperia 1; raha izany dia hiatrika ireto trangan-javatra manaraka ireto isika: 12 MP + 12 MP + 12 MP.
Ny processeur hanome fiainana azy dia tsy ho maodely ambany Snapdragon 855 nataon'i Qualcomm, izay no hitantsika amin'ny maodely ankehitriny. Azo inoana fa hamely ny tsena amin'ny efijery kely kokoa, noho izany dia tapaka kely ny bateria. Na dia somary hazavaina aza ny specs amin'ny faritra sasany (toy ireo), dia tokony ampidirina amin'ny faritra hafa izy ireo.
Mba hananana hevitra akaiky kokoa momba izay ho hitantsika ao amin'ny sahanin'ny orinasa Japoney manaraka, tsy maintsy jerenao ny toetra rehetra izay reharehan'ny Xperia 1; avy amin'ireo dia afaka manantena fanatsarana maromaro isika. Ity finday ity dia miaraka amin'ny efijery OLED diagonal 6.5-inch miaraka amina valiny QuadHD + avo indrindra 3,840 x 1,644 piksela, izay mahatonga azy hahatratra ny hakitroky ny pixel 643 dpi ary ny tahan'ny 21: 9 voalaza. Tsy mampiasa karazana rafitra notch na selfie azo esorina izany. Noho izany dia somary nanonona bezela izy na dia tsy teo amin'ny sisiny aza. Ho fanampin'izany rehetra izany, ny vera Corning Gorilla Glass 6 dia mitondra fiainana ho an'ilay takelaka hiarovana azy amin'ny rangotra, fikapohana ary karazana fanararaotana hafa.
Ny spektera Sony Xperia 20 vaovao dia mipoitra manondro ny Snapdragon 710 ho toy ny SoC
Ho fanampin'ny SD855 izay ananany ao anaty vavony, ny finday avo lenta dia misy RAM 6 GB sy habaka fitehirizana anatiny 64 na 128 GB. Ary tsy tokony hohadinointsika koa ny fakantsary triple aoriana, izay, araka ny efa nolazaintsika, dia manana sensor 12-megapixel vahaolana telo. Ho an'ny selfie, rafitra famantarana ny tarehy, antso an-tsary ary maro hafa, manana fakantsary 8 MP eo an-tampon'ny bezel azy izahay.
Mazava ho azy, ny rafitra fiasan'ny Android 9 Pie dia mandeha amin'ny fitaovana, ary koa ny rafitra mpandahateny stereo, bateria manana fahaiza-miaina 3,330 mAh miaraka amin'ny fanohanan'ny famandrihana haingana 18-watt sy ny sensor hafa ary ny safidy fampifandraisana mandroso.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ireo no sary namboarina tamin'ny Sony Xperia 2 izay manambara sy manamafy ny fisehoany
Ny Xiaomi Mi 9 5G no ho maodely 5G mora indrindra eny an-tsena